Falanqaynta Kulanka Juventus Vs Spezia Ee Horyaalka Serie A Italy
Home Falanqeynta Kulamada Falanqaynta Kulanka Juventus Vs Spezia ee Horyaalka Serie A Italy
Kooxda Juventus ayaa Spezia ku soo dhawayn doonta garoonka Allianz Stadium kulan ka tirsan horyaalka Serie A – da . Kooxda martida loo yahay ayaa dhibco ku lumisay kulankoodii Verona, iyadoo Cristiano Ronaldo uu dhaliyay goolkii barbaraha 1-1. Spezia ayaa sidoo kale ciyaartay bar baro 2-2 ah oo ay la gashay Parma, iyadoo Emmanuel Gyasi uu dhaliyay labo gool.
Saacada 22:45 pm Waqtiga Somaliya
Juventus:- Juventus ayaa wajaheysa dhibaato dhaawac waqtigaan. Waxay heystaan ​​ciyaartoy muhiim ah oo laga reebay gaar ahaan waaxda difaaca. Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini ayaa garoomada ka maqnaan doona, halka Juan Cuadrado uu wajahayo tijaabo caafimaad oo xilli dambe ah.
Qeybta weerarka, Paulo Dybala wuxuu wajahayaa waqti dheeri ah, halka helitaanka Alvaro Morata uu shaki ku jiro ka dib markii laga helay Cytomegalovirus, oo ah virus weligiis jiray.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Arthur ayaa sidoo kale ku maqan dhaawac muruqa ah. Danilo ayaa ka soo laaban doona ganaax hal kulan ah kulankaan.
Spezia:- Kooxda martida ah waxaa ka maqnaandoona Tommaso Pobega, Titas Krapikas, Rafael, Riccardo Marchizza, Juan Manuel Ramos iyo Federico Mattiello kulankii Parma. Ma jiraan wax war ah oo wanaagsan oo laga helayo taam ahaanshahooda, sidaas darteed waxaa la filayaa in kooxda ciyaartoydeeda laga reebay safarka Turin sidoo kale.
Labada koox ayaa iska horyimid kaliya todobo jeer tartamada oo dhan.
Guul 4-1 oo ay gaartay Juventus ayaa ahaa guushii ugu horeysay ee Juventus ay ka gaarto Spezia seddex kulan oo ay kulmeen tartamada oo dhan.
Juventus ayaa badisay 21 ka mid ah 23-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda kula ciyaartay kooxaha soo dallacay (D2), iyadoo ilaashanaysa 14 ka mid ah shabaqeeda.
Juventus ayaa badisay kaliya hal kulan shantii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan (D2 L2), ka dib markii ay badisay mid kasta oo ka mid ah lixdii kulan ee ka horeysay.
Juventus ayaa badisay shantii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku ciyaartay garoonkeeda Serie A, iyadoo dhalisay ugu yaraan labo gool mid kasta oo ka mid ah.
Spezia ayaa laga badiyay kulankeedii ugu dambeeyay ee ay marti ahaayeen – kaliya hal jeer ayaa laga badiyay labo kulan oo isku xigta, bishii December ee la soo dhaafay.
Previous articleFalanqaynta Kulanka Manchester City Vs Wolves ee Horyaalka Premier League
Next articleTammy Abraham oo doonaya inuu ka tago chelsea hadii ay fasaxaan.